Mgbakọ na ihe omume - Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Mgbakọ na ihe omume
Onyinye wardgwọ Ọrụ na-enyere aka ịmatakwu ihe ndị bụ isi nyocha na-enwe mmekọahụ na mmekọrịta ịhụnanya na nsogbu ndị ịntanetị na-akpali agụụ mmekọahụ. Anyị na-eme nke a site na isonye na nzukọ na ihe omume, site na nkuzi na site na inye onyinye na gọọmentị na ụlọ ọrụ. A na-emelite ibe a na akụkọ banyere ebe ị ga-ahụ ma nụ wardgwọ Ọrụ wardgwọ.
Lee ụfọdụ onyinye anyị…
TRF na 2020
8 February 2020. Mary Sharpe gosipụtara nnọkọ na Porn, Brain na Àgwà Ọjọọ Mmebi na Association maka Ọgwụ nke Mmekọahụ Mmekọahụ na mkparịta ụka na London.
18 June 2020. Mary Sharpe kwupụtara Usoro ndị na-abụghị ọrụ aka iji chebe ụmụaka pụọ ​​n'ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ: Iso ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na Nzukọ Nyocha Virtual Age.
23 July 2020. CESE Global Summit ebe Darryl Mead kwuru okwu Azọ nke nyocha n'ọdịnihu site na Nsogbu Ndị Na-akpali agụụ mmekọahụ Jiri.
27 July 2020. CESE Global Summit panel mkparịta ụka na Inweta Big Porn: Igosipụta Mmegbu, Sexzụ ahịa Mmekọahụ, na Mmekpa Ahụ. Mary Sharpe kwuru okwu n'akụkụ Laila Mickelwait site na Exodus Cry na Rachael Denhollander, onye ọka iwu, onye nkụzi na onye edemede.
28 July 2020. CESE Global Summit ebe Mary Sharpe kwuru okwu Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ n'Intanet na ndị ọrụ nwere Ọdịdị Egwuregwu Autistic na Mkpa Mmụta Pụrụ Iche.
12 November 2020. Mbugharị mbugharị. Na mkparịta ụka na Mary Sharpe, Thegwọ Ọrụ Foundationgwọ na Farrer & Co LLP, London. A kpọrọ okwu ahụ ka ọ kpuchie njikọ dị n'etiti iji ihe ndị gba ọtọ na ichebe ụmụaka na ndị na-eto eto.
TRF na 2019
18 June 2019. Darryl Mead na Mary Sharpe gosipụtara akwụkwọ ahụ Itinye aka na “Manifesto maka otu ụlọ ọrụ nyocha na Europe maka nsogbu iji ofntanetị eme ihe” na iche iche mkpa nke obodo ndị ọkachamara na ndị ahịa metụtara site n'iji nsogbu nke ihe ndi gba ọtọ. Nke a bụ na Nzukọ Mba Na-ahụ Maka Ahụhụ Mmebi na Yokohama, Japan. Anyị gosikwara akwụkwọ naIhe ịma aka nke ịkụziri ụmụ akwụkwọ banyere nchọpụta banyere ịṅụ ọgwụ ọjọọ.
5 October 2019. Darryl Mead na Mary Sharpe na-edozi mkparịta ụka na Nchoputa ohuru n'ime ihe ndi na-akpali agụụ mmekọahụ nke ntaneti dika ihe riri ahuhu na Society maka Ọganihu nke Mmekọ Ahụ Ike Mmekọahụ na St Louis, USA.
TRF na 2018
7 March 2018. Mary Sharpe kwadoro Mmetụta nke ịntanetị na-emetụta ụbụrụ nwa na sel Grey na sel nga: Izu nzuko nke uche nke ndi na eto eto. Ihe omume a sitere na Center for Youth and Justice Justice na Mahadum Strathclyde na Glasgow.
5 na 6 April 2018. Na 2018 End Mmekọahụ Mmekọahụ Global Summit na Virginia, USA, Darryl Mead nyere mmelite na Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na UK na Mary Sharpe duru Nzukọ Ọha na Ahụhụ gbasara Ọha na Ọha ndi 80 biara site na gburugburu uwa.
24 April 2018. TRF nyefere akwụkwọ nkwonkwo Na-ekwurịta Sayensị nke Intanet nke Ịntanetị na Wider Audiences na nzukọ 5th International banyere Ịgba Egwu na Cologne, Germany.
7 June 2018. Mary Sharpe wepụtara okwu ihu ọha na Intanet ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ụbụrụ na-eto eto na Lucy Cavendish College na Mahadum Cambridge.
3 July 2018. Mary Sharpe kwupụtara ihe ngosi banyere ihe ndị gba ọtọ na mgbakọ na London na Imebi Mmekorita na Mmekorita n'etiti Ụmụaka na Ụlọ Akwụkwọ: Ịmepụta Nkwekọrịta Multi-Agency.
5 October 2018. TRF gosipụtara akwụkwọ ahụ “Ikwado ntozu oke nke mmekọahụ na-eto eto”na Society maka Ọganihu nke Ahụ Ike Mmekọahụ na Virginia Beach, USA.
TRF na 2017
20 ka 22 February 2017. Mary Sharpe na Darryl Mead gara nzukọ 4th International na Ịgba Egwu na Haifa na Israel. E bipụtara akụkọ anyị banyere akwụkwọ ndị dị na nnọkọ a na magazin Mmekọahụ Mmekọahụ.
2 March 2017. Onye òtù òtù TRF Anne Darling wepụtara ihe atọ gbasara ihe TRF maka usoro ihe nkiri nke Perth, na-ezute ndị mmadụ 650 jikọtara ọnụ.
19 September 2017. Mary Sharpe kwusara okwu maka ụmụ akwụkwọ na ndị nne na nna kpọrọ Ntak ị na-eche banyere porn Internet maka Ememme Echiche na George Watson's College na Edinburgh.
7 October 2017. Mary Sharpe na Darryl Mead kwupụtara Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ n'Intanet; Ihe ndị nne na nna, ndị nkuzi na ndị ọkachamara ahụike chọrọ ịma na Day Community nke Society for the Advancement of Health Sex Conference na Salt Lake City, USA.
13 October 2017. Mary Sharpe na Darryl Mead kwupụtara Mmetụta nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'Internet na-enwe mmetụta uche na ahụ ike nke ndị nọ n'afọ iri na ụma na Edinburgh Medico-surgery Society.
21 October 2017. Onyinye wardgwọ Ọrụ ahụ gosipụtara okwu ihu ọha abụọ na ogbako na ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ịntanetị na Nzukọ Mba nke Atọ nke Ezinụlọ na Zagreb, Croatia.
16 November 2017. TRF mere otu nzukọ ọmụmụ mgbakọ na Edinburgh na Porn hụrụ n'anya. Mmetụta nke Ịntanetị na-akpali agụụ mmekọahụ na Brain.
TRF na 2016
18 na 19 April 2016. Mary Sharpe na Darryl Mead gosipụtara ogbako ahụ “Otu ratedzọ E Si Eweta Ihe Ndị Na-akpali agụụ mmekọahụ n'Intanet na Mmetụta Ya” na National National Treatment of Abusers (NOTA) Scotland ogbako na Stirling.
28 April 2016. Mary Sharpe na Darryl Mead nyere akwụkwọ "Ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'Internet na ụbụrụ nwa ya" na onlinePROTECT Conference na London “Ọ bụ naanị online, ọ bụghị ya?”: Ndị na-eto eto na ịntanetị - site na nyocha mmekọahụ na omume mmekọahụ siri ike. . Ihe nlere vidiyo nke Mary Sharpe na-aga site na Nzukọ ahụ bụ Ebe a.
4 May 2016. Anyị webatara akwụkwọ abụọ na atọ nke International Congress of Technology Addiction, na Istanbul, Turkey. Mary Sharpe kwuru okwu "Atụmatụ iji gbochie Intanet Porn Pornụ Ahụhụ Intanet" Darryl Mead kwukwara banyere ya “Ihe Ize Ndụ Ndị Na-eto Eto Na-eche Ihu Dị Ka Ndị Na-eri Porn”. E mechara bipụta okwu Darryl nke toro ogologo na akwụkwọ nyocha nke ndị ọgbọ Addicta, dị Ebe a.
17-19 June 2016. Mary Sharpe na Darryl Mead nyere akwukwo nke akpọrọ “Otu esi agbanwe ndị na-ekiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'Intanet ka ha ghọọ ndị na-azụ ihe ọmụma” na Nzukọ DGSS na Social Scientific Mmekọahụ Research, "Mmekọahụ dị ka Ahịa" na Munich, Germany.
7 September 2016. Mary Sharpe na Darryl Mead nyere akwụkwọ na "Iji otu mmekọrịta mmadụ na ibe ya kpughee ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ịntanetị dị ka okwu ahụike ọha na eze" na ogbako International Research Social Innovation Research (ISIRC 2016) na Glasgow. Akụkọ akụkọ banyere ogbako a bụ Ebe a. Ngosiputa anyi di na weebụsaịtị ISIRC.
23 September 2016. Mary Sharpe na Darryl Mead kwadoro otu ogbako "Mmetụta na-emebi emebi nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ịntanetị" na Society maka Ọganihu nke Ahụike Mmekọahụ na Austin, Texas. Akụkọ akụkọ banyere nke a na-egosi Ebe a. A na-ege ndekọ nke ngosi dị maka nbudata na SASH website maka ụgwọ maka US $ 10.00. Ọ bụ nọmba 34 na mpempe akwụkwọ.
29 September 2016. Mary Sharpe na Darryl Mead nyere akwụkwọ na "Intanet na-akpali agụụ mmekọahụ na ime ihe ike n'etiti ndị na-eto eto: a Review of Recent Research International" na nzukọ NOTA International na Brighton. Lee IHE maka nkọwa nke ogbako. Akụkọ anyị banyere ogbako ahụ bụ Ebe a.
25 October 2016. Mary Sharpe kwupụtara "Intanet ịntanetị na ụbụrụ nwata" na nchekwa dị n'ịntanetị maka ụmụaka na ndị na-eto eto nọ na Edinburgh nke ihe omume Holyrood mere. Pịa Ebe a maka akụkọ anyị.
29 November 2016. Mary Sharpe na Darryl Mead kwuru okwu "Iyi egwu mmekọahụ na ime ihe ike n'ụlọ akwụkwọ", ihe omume emere na Edinburgh site na Policy Hub Scotland. Akụkọ anyị banyere ihe omume ahụ bụ Ebe a.